Nceda Abantwana Bazi Izinto Ezibalulekileyo Ebomini
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaya IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTatar IsiThai IsiTiv IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkmen IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Yiyiphi ingxaki eyayinayo le ndoda?
NGENYE imini kwafika indoda ize kubona uYesu. Yayisazi ukuba uYesu ulumke gqitha, ngoko yathi kuye: ‘Mfundisi, xelela umntakwethu ukuba andabele kwezinye zezinto anazo.’ Le ndoda yayicinga ukuba ifanele ifumane ezinye zezo zinto.
Ukuba wawunguYesu, wawuya kuthini?— UYesu waqonda ukuba le ndoda inengxaki. Kodwa ingxaki yayo yayingekokuswela nje ezo zinto zomntakwayo. Ingxaki yale ndoda yayikukuba yayingayazi eyona nto ibalulekileyo ebomini.
Makhe sicinge ngoku. Yintoni efanele ibe yeyona ibalulekileyo kuthi? Ngaba kukuba nezinto zokudlala ezintle, impahla entsha, okanye ezinye izinto ezifana nezo?— Akunjalo, ikho enye into ebaluleke ngakumbi kunazo. Ibe esi sisifundo awasifundisayo uYesu. Ngoko wabalisa ibali lendoda eyamlibalayo uThixo. Ngaba ungathanda ukuliva?—
Le ndoda yayisisityebi. Yayinomhlaba omkhulu nezindlu zokugcina ukutya ezininzi. Isivuno sayo sasichuma kakuhle. Ezo zindlu zokugcina ukutya zazinganelanga ukugcina sonke isivuno sayo. Ngoko, yayiza kwenza ntoni? Yathi: ‘Ndiza kuzichitha ezi zindlu zam zokugcina ukutya ndize ndakhe ezinkulu ngakumbi. Ngoko ke ndiya kukwazi ukugcina sonke isivuno sam nazo zonke izinto zam ezilungileyo kuzo.’
Esi sityebi sasicinga ukuba silumkile ngokuzigcinela izinto ezininzi. Sathi: ‘Ndinezinto ezininzi ezilungileyo endizigcinele zona. Ziza kuhlala iminyaka emininzi. Ngoko ndingaphumla. Ndiza kutya, ndisele, ndize ndiziyolise.’ Kodwa kukho into eyayiphosakele koko kwakucingwa seso sityebi. Ngaba uyazi ukuba yayiyintoni leyo?— Sasicinga ngesiqu saso nangokuzonwabisa kwaso kuphela. Samlibala uThixo.
Icinga ntoni le ndoda isisityebi?
Ngoko uThixo wathetha neso sityebi. Wathi: ‘Mntundini ongenangqiqo. Uza kufa ngokuhlwanje. Ziya kuba zezikabani ke ezi zinto uzigcinele zona?’ Ngaba esi sityebi sasinokukwazi ukuzisebenzisa ezo zinto emva kokuba sifile?— Akunjalo, zaziya kufunyanwa ngomnye umntu. UYesu wathi: “Kuba njalo ngomntu oziqwebela ubuncwane kodwa engesosityebi kuThixo.”—Luka 12:13-21.
Ngokuqinisekileyo akufuni kuba njengeso sityebi, andithi?— Eyona njongo yaso ebomini yayikukuzifunela izinto eziphathekayo. Kwakuyimpazamo oko. Sasisoloko sifuna izinto ezingakumbi. Kodwa ‘sasingenabutyebi kuThixo.’
Baninzi abantu abafana neso sityebi. Basoloko befuna izinto ezingakumbi. Kodwa oku kunokubangela iingxaki ezinkulu. Ngokomzekelo, andithi unazo izinto zokudlala?— Ziziphi onazo?— Kuthekani ukuba omnye wabahlobo bakho unebhola okanye unodoli okanye enye into yokudlala ongenayo wena? Ngaba kufanelekile ukucela abazali bakho ukuba bakuthengele?—
Maxa wambi enye into yokudlala isenokubonakala ibaluleke gqitha. Kodwa yintoni edla ngokwenzeka kuyo ekuhambeni kwexesha?— Iba ndala. Isenokwaphuka, ize emva koko ungaphinde uyifune. Eneneni, kukho into onayo exabiseke ngakumbi kunezinto zokudlala. Ngaba uyazi ukuba yintoni leyo?—
Yintoni onayo exabiseke ngaphezu kwezinto zokudlala?
Bubomi bakho. Ubomi bakho bubaluleke kakhulu kuba akunakwenza nto ngaphandle kwabo. Kodwa ubomi bakho buxhomekeke ekwenzeni oko kumkholisayo uThixo, andithi?— Ngoko masingafani nesa sityebi singenangqiqo samlibalayo uThixo.
Asingobantwana kuphela abanokwenza izinto ezingekho ngqiqweni njengeso sityebi. Nabantu abadala abaninzi bayazenza. Abanye kubo basoloko befuna izinto ezingakumbi kunezo banazo. Basenokuba banako ukutya okwaneleyo, impahla yokunxiba, nendawo yokuhlala. Kodwa bafuna izinto ezingakumbi. Bafuna ukuba nempahla eninzi. Yaye bafuna izindlu ezinkulu. Ezi zinto zibiza imali eninzi. Ngenxa yoko basebenza nzima ukuze bafumane imali eninzi. Yaye okukhona befumana imali eninzi, kokukhona befuna engakumbi.
Abanye abantu abadala baxakeka gqitha bezama ukufumana imali bade bangabi nalo nexesha lokuhlala neentsapho zabo. Yaye ababi nalo nexesha lokunqula uThixo. Ngaba imali yabo ingakwazi ukubagcina bephila?— Ayinakukwazi. Ngaba banokukwazi ukuyisebenzisa imali yabo xa befile?— Abanakukwazi. Oku kungenxa yokuba abantu abafileyo abakwazi kwenza nto.​—INtshumayeli 9:5, 10.
Ngaba oku kuthetha ukuba kuphosakele ukuba nemali?— Akunjalo. Sithenga ukutya nempahla ngemali. IBhayibhile ithi ingumkhuseli. (INtshumayeli 7:12) Kodwa ukuba siyayithanda imali, siya kuzifaka engxakini. Siya kufana nesa sityebi singenangqiqo sazigcinela ubutyebi kodwa singenabo kuThixo.
Kuthetha ukuthini ukuba sisityebi kuThixo?— Kuthetha ukubeka uThixo kuqala kubomi bethu. Abanye abantu bathi bayakholelwa kuThixo. Bacinga ukuba ukukholwa nje kukodwa kwanele. Kodwa ngaba ngokwenene bazizityebi kuThixo?— Akunjalo, bafana nesa sityebi samlibalayo uThixo.
UYesu zange khe amlibale uYise wasezulwini. Akazange azame ukuzenzela imali eninzi. Yaye wayengenazinto ziphathekayo zininzi. UYesu wayeyazi eyona nto ibalulekileyo ebomini. Ngaba uyazi ukuba yintoni leyo?— Kukuba sisityebi kuThixo.
Yintoni eyona nto ibalulekileyo yenziwa ngulo mntwana?
Ucinga ukuba sinokuba zizityebi njani kuThixo?— Sinokuba zizityebi kuThixo ngokwenza oko kumkholisayo. UYesu wathi: ‘Ndisoloko ndisenza izinto ezimkholisayo.’ (Yohane 8:29) Nathi siya kumkholisa uThixo xa sisenza izinto afuna sizenze. Khawutsho ke, ziziphi izinto onokuzenza ukuze ukholise uThixo?— Ewe, unokufunda iBhayibhile, uye kwiintlanganiso zamaKristu, uthandaze kuThixo, uze uncede abanye ukuba bafunde ngaye. Zezo ezona zinto zibaluleke ngakumbi ebomini.
Ngenxa yokuba uYesu wayesisityebi kuThixo, uYehova wamnyamekela. Wanika uYesu umvuzo wokuphila ngonaphakade. Nathi ukuba senza njengoYesu, uYehova uya kusithanda aze asinyamekele. Ngoko ngamana singafana noYesu singabi njengeso sityebi samlibalayo uThixo.
Nazi iindinyana zeBhayibhile ezibonisa indlela esimele sizijonge ngayo izinto eziphathekayo: IMizekeliso 23:4; 28:20; eyoku-1 kuTimoti 6:6-10 namaHebhere 13:5.
UCameron Uphila Obona Bomi Bumnandi
Ubomi Bukavulindlela (Ingoma 140)